Film Capacitor ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Film Capacitor စက်ရုံ
Metallized film capacitors များသည်ယနေ့ခေတ်အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်များတွင်အသုံးများသော capacitor များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်နိမ့်သော film capacitors များအနေဖြင့် application များအား decoupling နှင့် filtering အတွက်အသုံးပြုသည်။
Power film capacitors များကို DC-link ဆားကစ်များ၊ Pulse လေဆာများ၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများနှင့် phase shifters များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
စတုဂံအမှုနှင့်အတူ DC-LINK MKP capacitors
Capacitor မော်ဒယ်: DMJ-PS စီးရီး
1. စွမ်းရည်အကွာအဝေး: 8-150uf;
2. ဗို့အားအကွာအဝေး: 450-1300V;
၃။ အပူချိန် - ၁၀၅ up အထိ၊
5. အလွန်မြင့်မားသော insulator တွင်လည်းခုခံ;
ရွေးချယ်မှုအတွက် ၇။ PCB တပ်ဆင်ခြင်း၊ ၂-pin၊ ၄-pin၊ ၆-pin terminal terminal များ၊
UL လက်မှတ် (AKMJ-PS) ပါသောမြင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား capacitor
စိုထိုင်းဆကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု Damp အပူ, Rated Voltage မှာတည်ငြိမ်ပြည်နယ်။
AKMJ-PS capacitor သည်လည်ပတ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင်လျှင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာသိုလှောင်နိုင်သည်။
Capacitor မော်ဒယ်: DMJ-MC စီးရီး
၁။ Voltage range - 450VDC-4000VDC
2. စွမ်းရည်အကွာအဝေး: 50uf-4000uf
3. Self- အနာပျောက်စေသောစွမ်းရည်
4. မြင့်မားသောဗို့အား, မြင့်မားသောလက်ရှိ, မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
5. Eco-friendly epoxy အဆာ
6. လျှောက်လွှာ: ပါဝါပြောင်းလဲခြင်း
အပူချိန် ၄၅၀ မှ ၄၀၀၀ VDC အထိရှိပြီးစွမ်းရည်အကွာအဝေး ၅၀ မှ ၄၀၀၀ အထိရှိသော DMJ-MC capacitor သည်ကြေးခွံနှင့်ပလတ်စတစ်အဖုံးများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်ဆလင်ဒါတွင်ထုပ်ပြီးခြောက်သွေ့သောစေးဖြင့်ဖြည့်သည်။ သေးငယ်သောအရွယ်အစားကြီးမားသည့် DMJ-MC capacitor ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
DMJ-MC metalized film capacitor သည်သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ မြင့်မားသောဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သက်တမ်းပိုရှည်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့်ထူးခြားသောမိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောစွမ်းရည်များကြောင့်ရိုးရှင်းသော electrolytic capacitor တွင် frequency converters နှင့် inverters များထက်အပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်များရှိသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာတာအတွက်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် DC link PP Film Capacitor (DMJ-PS)
၁။ သံဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါဝါယာကြိုး၊ သေးငယ်ပြီးအရွယ်အစားနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု
3. ESL နှင့် ESR နိမ့်သည်
မြင့်မားသောသွေးခုန်နှုန်းအောက်မှာ operating 4. စွမ်းရည်
electrolytic capacitors များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသက်တမ်းပိုရှည်သည်
၁။ DC-Link Circuit တွင်စွမ်းအင်စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း
၂။ Photovoltaic အင်ဗာတာ၊ လေစွမ်းအင်ပြောင်းလဲစက်
၃။ လျှပ်စစ်ကားများ၊ Hybrid လျှပ်စစ်ကားများနှင့်အားသွင်းစခန်း
၅။ Frequency Converter အမျိုးမျိုးနှင့် Inverter Power Supply အမျိုးအစားများ
RFM သော induction အပူ capacitor
ပါဝါအကွာအဝေး: 6000 uF အထိ
ဗို့အား Range: 3kv မှ 0.75kv
ရည်ညွှန်းစံ: GB ကို / T3984.1-2004
ထုတ်ကုန်၏ D.The ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -25 ~ + 50 the ၏အကွာအဝေး၌ရှိ၏
င) ရေအေးသည်စင်ကြယ်သောရေဖြစ်ရမည်၊ ရေထွက်ပေါက်၏ရေအပူချိန်သည် ၄၀ under အောက်တွင်ရှိသည်။
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အင်ဗာတာ DC-link ကိုရုပ်ရှင် capacitors
၅။ Film capacitors သည် electrolytics capacitor ထက်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။
Traction ယန္တရားအတွင်းရှိ IGBT-based Converters များအတွက် DC က bus Capacitors
DC ကဘတ်စ်ကား capacitor DMJ-MC စီးရီး
metallized film capacitors များသည် dielectric ကဲ့သို့ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော metall နှစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အလွန်ပါးလွှာသော (~ 0.03 μm ) လေဟာနယ် - အပ်ထားသောအလူမီနီယမ်သတ္တုကိုလျှပ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း Hybrid & Electric Vehicle Capacitors
1. ပလပ်စတစ်အထုပ်, Eco-fridendly epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အတူတံဆိပ်ခတ်, ကြေးနီဆောင်, စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာ
4. ESR နည်းပါးခြင်း၊ reverse voltage ကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်
5. ကြီးမားသောစွမ်းရည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ
metalized ရုပ်ရှင်ပါဝါအီလက်ထရောနစ် capacitor DMJ-MC စီးရီး
၁။ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု - အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန်အတွက် CRE မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထူးခြားသောထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများ။
၂။ စိတ်ချရသောမိတ်ဖက် - ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောစွမ်းအင်စနစ်ပံ့ပိုးသူများကို Capacitor ပေးသူနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါဝါအီလက်ထရောနစ်စနစ်တွင်တပ်ဖြန့်ထားသည်
3. ထူထောင်ထုတ်ကုန်အစုစု, ကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက် CRE ထုတ်ကုန်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတစ် ဦး သက်သေပြသမိုင်းနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အစုစုကို။
ROHS နှင့် REACH လိုက်နာသော Axial snubber capacitor SMJ-TE
IGBT snubber capacitors ၏ CRE အကွာအဝေးသည် ROHS နှင့် REACH လိုက်ဖက်သည်။
1. Flame နှောင့်နှေးဝိသေသလက္ခဏာများ
3. expoxy အဆုံးဖြည့်
4. UL94 သို့လိုက်နာပါ